‘मैले भनेको थिएँ नि केपी ओली भनेको फुटबलको पेलेजस्तै हो, गोल हुन्छ, हुन्छ! - Sidha News
‘मैले भनेको थिएँ नि केपी ओली भनेको फुटबलको पेलेजस्तै हो, गोल हुन्छ, हुन्छ!
शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि परेको दुवै दाबी नपुग्ने वक्तव्य आयो । देशवासी निद्रामा भए पनि बालुवाटार जागा थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो र संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भयो ।
‘मैले भनेको थिएँ नि केपी ओली भनेको फुटबलको पेलेजस्तै हो । गोल हुन्छ, हुन्छ’, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने । उनले अब मुलुक ५ पुसकै अवस्थामा फर्किएको बताए ।
त्यसबेला दिउँसो संसद् भंग गरिएको थियो । यसपटक भने मध्यरातसम्म कुर्नु पर्याे ।
५ पुसकाे संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । तर यो पटक राष्ट्रपतिसँग मिलेमलोमा संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना असम्भव जस्तै छ । तर घोषित मितिमा चुनाव हुनेमा धेरैलाई शंका छ ।
उनीहरुमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको आकलन शुरु भएको बेला कात्तिक र मंसिर चुनावका लागि घोषित मिति होइन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स भएको भन्दै उनले शनिबार बैठक बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आवश्यक रणनीति बनाउने बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष हुने बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शुक्रबार मध्यरात नै लोकतन्त्रमाथि डकैती गरेका थिए । तर जनताले छोडेनन्’ उनले भने, ‘जनताले जंगल धपाउनेछन् ।’